A.K.N CONSTRUCTION GROUP: December 2011
Muvee Reveal 8.0.1.17654 Build 2421 | 84 MB
ဒီစော့ဝဲကတော့ Video Editing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်....Video Editing ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Serial Key ပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်......Video Editing Software ကို လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်......Video Editing အတွက် Effect တော်တော်များများလည်း ပါဝင်ပါတယ်...စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်.....
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:37 AM No comments:
3D Movie လေးတွေလုပ်နိုင်အောင်
MakeMe 3D | 26.55 MB
ဒီစော့ဝဲလေးကတော့ Movie အားလုံးကို 3D Movie အဖြစ်သို့ အလွယ်တစ်ကူ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ စော့ဝဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်...ဒီစော့ဝဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ခံ Background ကို 3D Animated Movie တွေနဲ့ လှလှပပ အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေကတော့ Windows7မှာ ဆိုရင်တော့ Dream Scene ဆိုတဲ့ Portable Application ကို အသုံးပြုပြီးတော့ နောက်ခံ Background ကို 3D Animated Movie တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်....နောက်ခံ Background ကို 3D Animated Movie တွေကိုတော့ Windows Vista 2009 မှာတော့ Windows Function တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားပြီးသားပါ.....
အခု ဒီစော့ဝဲကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် နောက်ခံ Background မှာထည့်တဲ့ 3D Animated Movie တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...Dream Scene ကို အသုံးပြုပြီးတော့ နောက်ခံ 3D Animated Movie လုပ်ပြီးသားတွေကိုတော့ ဒီနေရာ မှာနှစ်သက်ရာ Gallery ကိုရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.....ယခု တင်ပေးထားတဲ့ စော့ဝဲကို အသုံးပြုပြီးတော့ လုပ်ထားတာတွေပါ...ယခုစော့ဝဲရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ ကနေ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်......စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်အောင် Keygen ပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်....စမ်းသပ်ရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ....
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:35 AM No comments:
Create Compelling Video and Slideshow Discs
Output projects faster with optimization for hardware acceleration
Produce discs from high-definition video, including AVCHD & AVCREC
Author your video projects to DVDs, Blu-ray Discs including BDXL
Include Dolby Digital 5.1 audio and menus for pro-like results
Edit and enhance videos quickly with Magic Tools
Click here to start download from MediaFire..
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:33 AM No comments:
ဒီကောင်လေးက Video Editing လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းကောင်းလေးပါ.ကျနော်တို့ အရင်က
Ulead 9,11,12 သုံးပြီး VCDသီချင်းလေးတွေ ပုံလေးတွေကိုထည့်ပြိး သီချင်းလုပ်တာလေးတွေ လုပ်ခဲ့ကျပါတယ်.
ဒီ Pro3ကလဲ သူတို့ထက် ကောင်းပြီး effectလေးတွေပိုမိုပါဝင်လာပါတယ်..ulead သုံးနေကျသူများ အဆင်ပြေစွာသုံးနိုင်ပါလေ့မယ်.
.အထဲမှာ ကီးဂျန်းကော ပါဝင်ပါတယ်..homepage မှာတော့ သူ့ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် 79 EURO လို့ပြောထားပါတယ်..:)
သူ့အကြောင်းကို ပိုမို စုံလင်စွာဖတ်ချင်ရင် သူ့ HomePage လေးကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်..
ဒီကောင်လေးက အားလုံးပေါင်းမက် ၆၅၀လောက်ရှိပါတယ်..ကျနော်ကတော့ အဆင်ပြေအောင် ziddu ကနေပြီး ဖိုင်တခုကို
မက် ၁၀၀ စီကျနော်ခွဲပေးထားပါတယ်..
သူ့ရဲ့ HomePage လေးကို ဒီမှာ သွားရောက်ဖတ်၇ှု့နိုင်ပါတယ်..
ဒီပို့တွက် pdf ဖိုင်လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:31 AM No comments:
Wedding Slide Show Video Album စနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်သော Wedding Album Maker Gold V3.08
Video Album Maker/Creator များစွာရှိသည့်အနက်၊ အခြား Maker/Creator များနှင့် ခြားနားစွာ Weeding လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် Video ကို စနစ်တကျ၊ Weeding Effect များစုံလင်စွာ နှင့်ဖန်တီးနိုင်ရန် အတွက် Specialized ပြုလုပ်ပေးသော Weeding Album Maker Gold V3.08 Latest Version ပါ။ Photo, Video များကို Weeding နှင့် သက်ဆိုင်သည့် Transation Effect 260 ကျော် နှင့် Art Clip များ၊ Text များ၊ DVD Menu Template များကို ထည့်သွင်းခါ Slide Show Video အဖြစ်ဖန်တီး၍ VCD/DVD များသို့ တိုက်ရိုက် Burn ပေးနိုင်ပါတယ်။ Out Put Video Format များအနေနဲ့ အသုံးများသည့် AVI, FLV Format များအပြင်၊ MPEGI, MPEGII, MPEG-4, 3GP, XVid Format များနှင့် iPhone, iPod , PSP, Blue Ray Disc, HD Format များအဖြစ် Save လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Download လုပ်ပြီးလျှင် Rar File ကို ပြန်ဖြည်၍ Weeding Album Maker Gold File ကို Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် Adobe Flash Player ကို Install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။ Weeding Album Maker Gold File ကို Install လုပ်ပြီးလျှင် Help Menu မှ Register သို့သွားခါ Download File ထဲတွင်ပါဝင်သော Serial Key တစ်စုံကို ထည့်၍ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Activate Button ကို နှိပ်ပေးလိုက်လျှင် Gold Edition Full Version ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 22 MB ရှိပြီး Window XP, 2000, Vista နှင့်7များမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Weeding Album Maker Gold V3.08 ကို Download လုပ်ရန်
Adobe Flash Player မရှိလျှင် Download လုပ်ရန်
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:27 AM No comments:
VideoPad Video Editor Pro 2.40
VideoPad Video Editor Pro 2.40 | 8.31 MB
ဒီစော့ဝဲကတော့ Video File တွေကို Editing လုပ်ရတာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စော့ဝဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.....အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူတဲ့ အပြင် Effect များကို အသုံးပြုပြီး နှစ်သက်သလို Editing လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်....အသုံးပြုနိုင်မှု အသေးစိတ်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မူရင်းWebsite မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်....စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်း Keygen ပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်....စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်.....
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 1:25 AM No comments:
ဒီ Crazy Talk ဆော့ခ်ဝဲအကြောင်း ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာ ဒီကောင်က သုံးတရတာ တော်တော် လေးကောင်းတယ်ဗျ.. ဓာတ်ပုံတွေကို Movie ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ့် ကြိုက်တဲ့ အသံထည့် ထည့်တဲ့ အသံ အတိုင်း ပါးစပ် ၊ မျက်စိ ၊ မျက်ခုံး မျက်နှာ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကို လှုပ်ရှားစွားပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ခ်ဝဲ လေးပါ ။ ကဲပြောနေတာကြာတယ် မြန်မြန်သာ ဒေါင်းလိုက်ကြတော့။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 12:27 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 12:24 AM No comments:
မမတွေအတွက် Hair Style
မမတွေအတွက် Hair style လေးပါ..။ ဟိုတခါက ကိုကိုတွေအတွက် ဒီတစ်ခါ မမတွေအတွက်ပေါ့ .. မျက်နှာကို ပြင်ခြင်း ၊ မျက်မှန်တက်ခြင်း ၊ ဦးထုပ် ၊ နှုတ်ခမ်းနီ အစရှိသဖြင့်နှင့် ဆံပင်ပုံစံကို ကိုယ်နှင့်လိုက်ဖက် ရာနောက်ဆုံး ဒီဇိုင်း များပြောင်းလဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ...........။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 12:22 AM No comments:
Download Free PC Image Editor v4.0
ဒီsoftware လေးကတော့ ဓါတ်ပုံအလှပြင် ကြိုက်သူတွေအတွက်၏
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ Download ယူပါ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:23 PM No comments:
Get Free KeyCode Simpo PDF Creator Pro for Giveaway
thanksgiving day အတွက်အထူးလက်ဆောင်လေးအခုပါ
ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဒေါင်းချင်သူများ ဒီနေ့တနေ့ပဲFreeရတဲ့အတွက်မို့မြန်မြန်ဒေါင်းကြပါ
Please goto facebook promo page: http://www.facebook.com/SimpoPDF?sk=app_14167664298
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:17 PM No comments:
လက်တို့လိုက်တာ . နောက်ဆုံးထွက် realplayer sp plus 12 ပါ .. ၀ဘ်ဆိုက်က movies တွေနဲ့ mp3 ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို download လုပ်ကြမလဲလို့မေးရင် အကောင်းဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ real player ကို တင်လိုက်ပြီးတော့ download လုပ်တာက အဆင်အပြေဆုံးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူက mp3, mp4 သီချင်းတော်တော် များများကို download လုပ်လို့ ရလို့ပါပဲ .. ဥပမာ တစ်ခု ကျွန်တော် လုပ်ပြပါ့မယ် .. ၀ဘ်မှာတင်ထားတဲ့ သီချင်းတော်တော်များများကို download လုပ်နိုင်တယ် .. ပြီးတော့ youtube မှာတင်ထားတဲ့ movie တွေကိုလဲ ဒေါင်းနိုင်တယ်ဗျ .. သူစွမ်းဆောင်နိုင်တယ် မနိုင်ဘူး ဆိုတာကိုလဲ ချက်ခြင်းသိနိုင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးထားပါတယ် … 75 % လောက်ကို သူက သိပါတယ် … အောက်မှာ ကျွန်တော် www.flashband.net မှာ သီချင်း နားထောင်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို download လုပ်လိုက်ကြည့်တာပါ .. ကျွန်တော် အခုအချိန်အထိ လက်ကိုင်ထားပြီး သုံးနေဆဲပါပဲ …. သူငယ်ချင်းတို့ နားထောင်လို့ရတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်က သီချင်းတွေကို သူတို့က download လင့်မပေးလဲ realplayer လေးရှိနေရင် သူပေးပေး မပေးပေး မိမိကိုယ်တိုင် download လုပ်လို့ရပါတယ် .. စမ်းကြည့်ပါဦး .. စမ်းကြည့်တော့သိမှာပေါ့ ..
RealPlayer SP Plus 12 ကို download လုပ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ … install လုပ်တာကတော့ လွယ်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်လို့ ကျွန်တော် မရှင်းပြတော့ပါဘူး ဒီမှာ
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:02 PM No comments:
Desktop (create shortcut)ဆိုတာလေးပျောက်နေခဲ့သော် ( XP )
တကယ်လို့များ သူငယ်ချင်းတို့ မှာ Send To ကနေကြည့်လိုက်လို့
Desktop (create shortcut ) ဆိုတာလေး ပျောက်နေတယ်ဆိုရင်
အောက်ပါအတိုင်း Run မှာရေးပါ..။
%systemdrive%\_Documents and Settings\_Default User\_SendTo
ပီးရင်တော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ Desktop (create shortcut ) ဆိုတာကို Copy လုပ်လိုက်ပါ..။
%userprofile%\_SendTo ဆိုတာကို Run Box မှာ ထပ်ရိုက်လိုက်ပါ..။
ပီးရင်တော့ Enter ပေါ့.။ ပီးပီဆိုရင်တော့ အစောက ကျွန်တော်တို့ Copy လုပ်ထားတဲ့
Desktop (create shortcut ) ဆိုတာကို အဲ့ဒီမှာ ထားပေးလိုက်ပါ..။ ပီးပီဆိုရင်တော့
ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ..။ Desktop (create shortcut ) ဆိုတာလေး ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:26 AM No comments:
ဘလော့ပို့စ်တွေမှာ smiley လေးတွေထည့်ရေးကြမယ်
by ရာမညတိုင်းသား on Nov.22, 2009, under Blog
တချို့လည်းသိပီးသားဖြစ်မှာပါ..။ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ.။
Firefox နဲ့မှ အဆင်ပြေပါတယ်..။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Grase Monkey ဆိုတာက Firefox ရဲ့ Add on
တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ..။ အရင်ဆုံး Grase Monkey ကို Dကနေ ရယူလိုက်ပါ.။ ပီးရင်တော့
GraseMoneky ကို Install လုပ်လိုက်ပါ..။ ဒါဆိုရင်တော့ Firefox ရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေမှာ
ပီးရင်တော့ js နဲ့ရေးထားတဲ့ Emotion ကို Dနေရာနဲ့ Dနေရာ ကနေရယူပီးတော့ Grase Monkey နဲ့ Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ.။
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Emotion နှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး ..။နှစ်ခုလုံးကို Install လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
ပီးရင်တော့ Blog ရဲ့ Html code ပြင်တဲ့ Edit Html ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ..။
Border text မပိတ်ခင်မှာ ကျွန်တော်အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ကုတ်ကို ထည့်လိုက်ပါ.။
ပီးရင် တော့ Save လိုက်ပါ..။ပီးရင်တော့ Blogger ရဲ့ Compose Preview ကိုသွားလိုက်ပါ..။
ဒါဆိုရင်Smiley လေးတွေ ထည့်လို့ပီပါပီ.။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:24 AM No comments:
Flash Effect Maker Pro v5.01( Portable)
ဒီ ဆော့ဝဲလ်ကတော့ Blogger သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်
Flash template ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:22 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:16 AM No comments:
Kaspersky Keys (KAV & KIS 2010)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ..Cbox မှာ Kaspersky 2010 Keys ကို တောင်းဆိုထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (အေပြီ ၁၅) ထုတ် Key တွေဖြစ်ပြီး မိမိစမ်းသပ်ကြည့်တာတော့ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်
လိုချင်သော မိတ်ဆွေတွေများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ကြပါ..အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်..
Download Link 1 (Mediafire)
Download Link2(RGhost)
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:11 AM No comments:
Keys for Kaspersky (16.06.2010)
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:10 AM No comments:
Kaspersky KAV/KIS/PURE UPDATED (2010)
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:09 AM No comments:
Blog မှာ Logo ပြုလုပ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ Blog မှာ ကိုယ်ပိုင်း Logo နဲ့ Blog လ်ိပ်စာမှာ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ လုပ်နည်းကတော့ ကို Logo ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ပုံတွေကို အရင် hosting တင်လိုက်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် upload လုပ်တယ်လို့လဲ ခေါ်တယ်လေး။ http://tinypic.com/ ဆိုဒ်မှာ အရင် upload လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် အောက်ကအဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ။
1. မိမိ Blog မှ Layout မှ Edit Html ကို click လိုက်ပါ။
2. ဆိုတာကို ရှာလိုက်ပါ။ ( ctrl+f ကိုနိုပ်ပြီ ရှာလိုက်ပါ။)
3. ရဲ့နောက်မှာ ( အောက်က code က href ရဲ့နောက်မှာ အနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့နေရာမှာ မိမိ upload တင်ထားတဲ့ url နဲ့ အစားထိုးပြောင်းပြီတာနဲ့ )copy လုပ်ပြီ ထည့်လိုက်ပါ။
http://********.gif" rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon">
4. ပြီရင် save လိုက်ပါ။ မိမိဆိုဒ်ကို click လိုက်ပါ။ logo လေး ပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာပါ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 7:01 AM No comments:
Blog မှာ Content Warning ကို Remove လုပ်နည်း
ကျွန်တော် အကို တစ်ယောက်က မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ချင်းမမှတ်မိလို့ ဒီနေ့မှ ရေးဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ ဘလော့လ်ကို စဖွင့်ဖွင့်ချင်မှာ Content Warning ဆိုပြီ တက်လာပါတယ်။ i understand and wish to continue ကိုနိုပ်မှ မိမိ blog ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တော့ စိတ်အနှောက်အယှက် အတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ Content Warning ပေါ်တာကတော့ Adult Content? မှာ Yes ပေးထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် No ပေးလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အောက်မှာ ပုံအတိုင်း ပေါ်နေတာကို ကြည့်လိုက်ပါ။
အထပ်ပါလိုမျိုး Content Warning တက်မလာအောင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
1.မိမိ blog ကို Sign In လုပ်လိုက်ပါ။
2. Setting >> Basic ကို ၀င်လိုက်ပါ။
3.Basic မှာ Adult Content? ကို ရှာလိုက်ပါ။ Yes ပေးထားလျင် Content Warning က မိမိ blog စဖွင့်ဖွင့်ချင် အရင်တက်လာပါမည်။ No ပေးထားရင် မိမိ Blog ကို ချက်ချင်း ရောက်ပါမည်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့က Content Warning မတက်စေချင်တာဖြစ်တာကြောင့် No ပေးလိုက်ပါ။
4.Save Changes ကို click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိ Blog ကို Content Warning တက်မလာတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @moehtatmyint
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 6:56 AM No comments:
blog မှာ နာရီလေးတွေထည့်ရအောင်
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 6:53 AM No comments:
Galk မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ... စမ်းသပ်နည်း....
Gtalk မှာ ကိုယ် မ chat ချင်တဲ့/မကျေနပ်တဲ့ သူကို block လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ကိုယ် block လုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့ ID ပေါ်မှာ right-click လုပ်ပြီး block ကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကိုယ့်ဘက်မှာ အဲဒီID ပျောက်သွားပြီး၊ သူ့ဘက်မှာတော့ ကိုယ်က offline ဖြစ်နေမှာပါ။
(သူများကိုသာ block လုပ်ချင်တာ...ကိုယ့်ကို block လုပ်တာကိုတော့ သိပ်ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား..။ )
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကို block လုပ်ထား/မထားကို စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ပထမဆုံး ကိုယ်သိချင်တဲ့သူကို ရွေးပါ..ပြီး.. 'Send voicemail' button ကိုနှိပ်ပြီး call လုပ်လိုက်ပါ။
(သူ့ကို offline အနေနဲ့ပဲမြင်ရမှာမို့ အဲဒီအချိန်မှာ 'Send voicemail' button ပဲပေါ်နေမှာပါ။)
မိန်းကလေးသံနဲ့ 'The person you are trying to reach is unavailable. Please leaveamessage...' ဆိုတဲ့ အသံမျိုး ကြားရရင်တော့ ကိုယ့်ကို block လုပ်မထားပါဘူး။
တကယ့်ကို offline ဖြစ်နေတာပါ။
အဲလိုမဟုတ်ပဲ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျ ကျသွားတယ်၊ ဘာသံမှလည်းမကြားရဘူးဆိုရင်တော့...
စိတ်မကောင်းပါဘူး...သင့်ကို block လုပ်ထားတာပါ...
ကဲ...ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲသိချင်ရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား...။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:28 PM No comments:
. Gtalk က offline chat (သူခိုးချက်)တွေကို ဖမ်းပုံဖမ်းနည်း...
ကိုယ့်ရဲ့ Gtalk က လူတယောက်ကို offline အနေနဲ့ တွေ့နေရတယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီ့လူ ကတကယ် offline ဖြစ်မဖြစ်ကို သိချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ဒါဆို စစ်တဲ့ နည်းလေးရှိပါတယ်။ offline အစစ်လား offline အတုလား သိချင်ရင် ဒီလိုလေးလုပ်ပါ။
(၁) Gtalk မှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ offline ဖြစ်နေတဲ့ လူနဲ့ ပုံမှန်ချက်သလိုပဲ ဖွင့်လိုက်ပါ။
(၂) Send voicemail ရယ် Call ရယ် စတဲ့ ခလုပ်တွေဘေးနားက
ပြီးရင်.. Go off the record ကို နှိပ်ပါ။
(၃) သူ့ကို ပုံမှန်ချက်သလို စာတခုခု ရိုက်ထဲ့ပြီး ချက်ကြည့်ပါ။
ဥပမာ… hi လို့ ရိုက်ပြီး ချက်ကြည့်ပါ။
(၄)..............@gmail.com is offline and can’t receive messages right now.
လို့ ပေါ်လာခဲ့ရင် သူတကယ် offline ဖြစ်နေတာပါ။
တကယ်လို့ ဘာမှ မပေါ်လာရင် သူ Invisible လုပ်ထားတာပါ။
(၅) စစ်ပြီးသွားရင် “Stop chatting off the record” ကို ပြန်နှိပ်ပေးပါ။
ဒါမှ နောက်ပိုင်း သူနဲ့ ချက်ရင် Gmail က Chat section မှာ Chat history
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:24 PM No comments:
အင်တာနက်မရှိသည့်အချိန်တွင် စမ်းသပ်အဆင့်Offline Gmail သုံးစွဲနည်း..
ကမ္ဘာကျော်Google၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Gmail Service
အသုံးပြုသူများအတွက် Offline Gmailကို ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် Googleမှ
စတင်ဖြန့်ဝေလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ Offline Gmail ဝန်ဆောင်မှုကို
အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝင်းဒိုးစ်စနစ်တွင်ပါဝင်သော Microsoft
Outlookကဲ့သို့ပင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု မရှိသည့်အချိန်တွင်လည်း
အီးမေးလ်ဖတ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်ရေးသားခြင်းတို့ကို မိမိ၏ကွန်ပျူတာတွင်
ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခင် Gmail Serviceတွင်
Accountတစ်ခုအတွင်းရှိ ဝင်စာ(Inbox mail)၊ ထွက်စာ(Sent mail)နှင့်
ပူးတွဲပါဖိုင်များ(Attachment file) စသည်တို့ကို Google Serverများ၌သာ
သိမ်းဆည်းထားပြီး အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ရှိမှသာလျင် Gmail အသုံးပြု၍
ယခု Offline Gmail ဝန်ဆောင်မှုကို Email Account တစ်ခုတွင်
တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါက အဆိုပါ Accountနှင့် ပတ်သက်သည့် E-mail, Attachment
စသည်တို့ကို Gmail Serverတွင်သာမက မိမိကွန်ပျူတာရှိ E-mail
Serverတွင်လည်း တစ်ပြိုင်းတည်း downloadလုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးသွားမည်
ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Gmail သုံးစွဲသူတစ်ဦးသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်၍
သုံးစွဲနေစဉ် ထိုသုံးစွဲသူ၏ E-mail Accountသို့ ဝင်ရောက်လာသော Inbox
mail၊ အခြားသူထံ ပို့လိုက်သော Sent mailနှင့် Attachment fileများ
အားလုံးကို ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Mail Serverတွင်လည်း တစ်ပြိုင်တည်း
သိမ်းဆည်းထားနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Gmail သုံးစွဲသူသည်
အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့် အင်တာနက်မရတော့သည့် အချိန်တွင်လည်း မိမိ၏
မေးလ်များကို ဖတ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်များ ရေးသား၍ အဆင်သင့်
သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး အင်တာနက်ရသည့်အခါ ချက်ချင်းပေးပို့နိုင်ခြင်းများ
ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Offline Gmail ဝန်ဆောင်မှုမှာ Google၏
Opensource Software တစ်ခုဖြစ်သည့် Google Gearကို အသုံးပြုကာ Google
Serverရှိ သုံးစွဲသူ၏ Gmailဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာသို့
အလိုအလျောက် download ပြုလုပ်ပေးသည့် စနစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Offline Gmail Support ဝန်ဆောင်မှုကို မိမိ၏ ကွန်ပျူတာတွင်
တပ်ဆင်အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၁။ Gmailသို့ sign-in လုပ်ရပါမည်။
၂။ မိမိ Gmail စာမျက်နှာသို့ ရောက်ပါက "Settings"ကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ "Setting" အောက်မှ "Lab"ဆိုသည့် tabကို ရွေးချယ်ပါ။
၄။ "Lab"စာမျက်နှာတွင် ကဏ္ဍများစွာ ရှိသည့်အနက်မှ အပေါ်ဆုံးရှိ
"Offline"ဆိုသည့်ဘေးတွင် "Enable"ကို ရွေးပေးရပါမည်။
၅။ ထို့နောက် "Lab"စာမျက်နှာ အောက်ဆုံးကိုသွား၍ "Save Changes" လုပ်ပါ။
၆။ "Save Changes" လုပ်ပြီးသည့်အခါ မိမိ၏ Gmail စာမျက်နှာရှိ
"Settings"၏ဘေးတွင် "Offline 0.1"ဆိုသည့် Linkတစ်ခုကို တွေ့ရပါမည်။
၇။ Offline Gmailကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အဆိုပါ Linkမှတဆင့် Google Gearကို
လက်ခံအသုံးပြုဖို့ "Allow it to use Gears"ဘေးမှ check boxကို အမှန်ခြစ်
ပြုလုပ်ပါ။ "Allow" buttonကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
၈။ ထို့နောက် Offline Gmailကို ကွန်ပျူတာတွင် အလွယ်တကူ
မြင်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရန် Shortcut Icon ထားလိုသည့် နေရာရွေးချယ်ရပါမည်။
ထို့နောက် "OK" buttonကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက Google Serverတွင်
သိမ်းဆည်းထားသည့် (၃)နှစ်အောက်သက်တမ်းရှိ မိမိ၏ မေးလ်များနှင့်
Attachment fileများ အားလုံးကို ကွန်ပျူတာရှိ E-mail Serverသို့ Download
လုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ Google၏ Offline Gmailသည်
စမ်းသပ်နေဆဲ(Lab Version)အဆင့်တွင်သာ ရှိသေးပြီး မကြာမီ အပြည့်အဝ
အသုံးချနိုင်သည့် အဆင့်(Full Version)အဆင့်သို့ မွမ်းမံပြင်ဆင်သွားမည်ဟု
မှတ်ချက်။ ။ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ကွန်ပျူတာသုံး မဟုတ်သူများ မလုပ်သင့်ပါ...။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:20 PM No comments:
သင်သုံးနေတဲ့ Password ကလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား........
အွန်လိုင်းကို အသုံးအပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမှာ အနည်းဆုံး ကိုယ်ပိုင် password တစ်ခုကတော့ရှိရမှာပေါ့။
email password ကစပြီး ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ passwordတွေလည်းရှိကြမှာပါ..။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတိုင်းဟာ password နဲ့ကင်းလို့မှမရတာပဲကိုး။
အခုကျွန်တော်လင့်ပေးမဲ့ ဆိုက်လေးက မိတ်ဆွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် password တွေက လုံခြုံမှုရှိလားမရှိဘူးလား ပြောင်းလဲပစ်ဖြစ်ဖို့လိုသလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။
ထုံးစံအတိုင်း စိမ်းရင်တော့ ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။
အနီများရင်တော့ password ပြောင်းပေတော့ပေါ့ဗျာ။
Link .. ( http://www.passwordmeter.com/ )
မဖြစ်မနေ စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးပါ...။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:03 PM No comments:
Windows XP ရဲ့ Product Key ကိုဒီလိုရှာနိုင်ပါတယ်...
အဆိုပါဖိုင်များသည် ဖောက်ထားတတ်လို့ ကွန်ပျူတာမှာ Tool/Folder Options ကတစ်ဆင့် View/Show hidden file and folders' ကိုရွေးချယ်ဖွင့်ထားပါ။
Auto တက်လာရင် ပြန်ပိတ်ထားပါ။
MY Computer ကိုဖွင့်ပါ....
-ဝင်းဒိုးစီဒီထည့်ထားသော drive icon ကို မောက်စ်ညာကလစ်နှိပ်ပြီး exploreသို့မဟုက်
-Search မှာ unatted.txt လို့ထည့်ရိုက်ပါ။
၎င်းသည်(UNATTEND.TXT)text ဖိုင်ဖြစ်ပြီး 386 ဖိုင်ဒါထဲမှာရှိ့တက်ပါတယ်။
Windows XP version ပေါ်မှုတည်ပြီးနေရာတူချင်မှတူပါမယ်။
ဖိုင်အောက်ဆုံးနေရာမှာ product keyရေးထားတာတွေ့ရပါမယ်...။
သို့မဟုက်အဲ့ဒီဖိုင်ကို ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းပြီး ကော်ပီလုပ်ထားလိုက်ပါ။
-၎င်း အတွက် သီးခြားဆော့ဝဲတစ်ခုခုကိုသုံးကြည့်ပါ့မယ်။
ယခုworldwide Sysinfo Toolရဲ့AIDA32 http://www.aida32.hu/ သုံးပါ့မယ်။
၎င်းသည်trial အဖြစ် အခမဲ့ down load ရယူနိုင်တာဖြစ်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
AIDA32သည်ကွန်ပျူတာတခုလုံးက component အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးလို့ အသုံးဝင်တဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ် ။
Operating Systm သို့မဟုက်Software အုပ်စုကိုဖွင့်ပြီး License ကိုဖွင့်ပါ။
၎င်းတွင် License သို့မဟုက် product key များကိုပြထားပါတယ်။
ကော်ပီလုပ်ပြီး word မှာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
-Belarce Advisor (2002-2008 Belarce,Inc.U.S)ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလဲမဆိုးပါဘူး..။
ကွန်ပျူတာထဲကရှိ့၇ှိ့သမျှ ဟာဒ်ဝဲ၊ဆော့ဝဲအချက်အလက်အားလုံးကို ဖော်ပြပေးတာတွေ့ရပါတယ်..။
တင်ထားတဲ့ဆော့ဝဲများရဲ့ serial number များအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:59 PM No comments:
.Gmail တွင် ပို့ပြီးသား Mail ပြန်ဖျက်ချင်ရင်....
Google သုတေသန Lab မှ G-Mail အသုံးပြုသူများ ၎င်းတို့ ပို့ထားသည့် Mail များကို ပြန်ဖျက် ပစ်နိုင်သည့် Feature တခုကို ထည့်သွင်း ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Undo Send ဟုအမည် ပေးထားသော အဆိုပါ Feature ကြောင့် အမှားပါသော Mail များကို ပြန်ဖျက်ပစ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရလာမည်ဟု Google ကဆိုသည်။
မူလက G-Mail ပို့ပြီးနောက် ထို Mail များကို ပေးပို့သူများ အနေနှင့် ပြန်မဖျက်ပစ် နိုင်ချေ။
ယခု Feature အရ Mail ပို့ပြီး (၅)စက္ကန့်မျှ အတောအတွင်း Undo ဖြင့် ဖျက်ပစ်နိုင်သလို နောက်ပိုင်း အချိန်ကြာမှ ဖျက်ပစ် လိုပါကလည်း Sent Mail ထဲရှိ မိမိပို့ထားသော Mail ကို Undo ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို Feature ကို အသုံးပြု လိုပါက G-Mail Account ထဲရှိ Setting တွင် Undo Send ဆိုသော နေရာလေးအား Enable ကလစ်လုပ်ပါ...။
Setting > Labs > Undo Send > Enable > Save Changes ဆိုရင် ရပါပြီ..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:56 PM No comments:
. windows XP ရဲ့ရိုးရှင်းသော..လျှို့ဝှတ်ချက်...၄၀
Window XP ရဲ့ ရိုးရှင်းသော လျှိူ့ ဝှက်ချက် (၄၀)
ဘယ်ဘက် panel မှာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ “control panel” ကို
ထပ်ရွေးပါ။ “Control panel” ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။ ညာဘက်အကွက်မှာ ပေါ်လာတဲ့
“Menushowdelay” ကို Right click နှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို “0″ ထားပါ။ ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Restart
(၂) မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
- အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို ‘Ctrl+A’ နဲ့ Select ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။ (အချို့  လုပ်ဆောင်နေဆဲ
ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတတ်ပါတယ်။)
- Accessories ကနေတစ်ဆင့် “System tools” အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ “Disk Clean Up” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၅
မိနှစ်အ တွင်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အ မှိုက်သရိုက်တွေ မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ်အ နေနဲ့
အပြင်ကို ခဏတဖြုတ် သွားမယ့် အ ချိန်မျိုးတွေမှာ သိပ်အ သုံးဝင်ပါတယ်။)
- ညာဘက် အ စွန်းဆုံးမှာ “Start up tab” ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
- ကိုယ့်အ တွက် အသုံးမ၀င်တဲ့ program တွေရဲ့  ရှေ့  မှာ အ မှန်ခြစ် အ မှတ် အ သား လုပ်ထားခဲ့ရင် ပြန်ပြီး
- တကယ်လို့ NTFS ပြောင်းပြီးသား ဆိုရင် ပြောင်းဖို့ မလိုပါ။ My computer ကို Right Click နှိ်ပ်ပြီး
“properties” မှာဖွင့်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
- XP ရဲ့ default မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို
မောင်းနှင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ရှိရင်းစွဲ memory
ကိုပဲ လှည့်ကွက်တစ်ခု အနေနဲ့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
- “Memory Managment” ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက် panel မှာ ရှိတဲ့ “Disable pasing executive” ကို
Double Click နဲ့ ဖွင့်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေ၊ folder တွေ၊ ebook စတာတွေကို လုံခြုံစေဖို့ နည်းလမ်းအ မြောက်အ မြား ရှိပါတယ်။
password ပေးပြီး သိမ်းဆည်းထားတာဟာ အ လုံအခြုံဆုံးပါပဲ။ အဲဒီလို password ပေးတဲ့အ ခါမှာ
သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို folder တစ်ခုထဲကို အ ရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင်ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ Name ပြောင်းပါ။ ပြီးရင်
Windows ရဲ့ built-in zip format ကို password ပေးပါ။
- File menu အောက်မှာရှိတဲ့ Addapassword ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှဟာ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ extension နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ebook
စာအုပ်တွေဆိုရင် (.pdf)၊ စာစီစာရိုက် ဆော့ဖဲဝဲ pagemaker ဆိုရင် (.pmd)၊ Photoshop ဆိုရင် (.psd)
(.jpg) စတဲ့ အဆုံးသတ် extension တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ extension တွေကို ဖော်ထားလို့ ရသလို
အဲဒီက “File Types” ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။ (အဲဒီအခါမှာ ဖိုင်ရဲ့ extension တွေ တစ်ခုချင်းစီအလိုက်
- အခု ဖုံးကွယ်ထားမယ့် ဖိုင်တစ်ခုကို extension ပြောင်းပေးပါ။ ဥပမာကိုယ်က (.pmd)နဲ့ စာရိုက်ထားတဲ့ page
တစ်ခုကို ဖျောက်ထားချင်ရင် အဲဒီ (.pmd) နေရာမှာ (.pdf) စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါ။
- အဒီအခါမှာ ကိုယ့်ဖိုင်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မမှတ်မိ နိုင်တော့တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့
- ‘Task Manager’ ထဲကမှ ‘process tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့် ပီစီထဲမှာ ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ browser တွေ
Hibernate ကို ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အသိများပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကိုယ်သုံးစွဲထားခဲ့တဲ့
ပရိုဂရမ်တွေအတိုင်း ပြန်ပေါ်ထွက်လာအောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် memory ကို အရမ်းစားပြီး hard
disk မှာလည်း မတရား နေရာယူလွန်းပါတယ်။
အမြဲလို ကြုံရဘူးပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ခုလောက်ပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ‘Memory Inerupt’ ဆိုပြီး
ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ကို ပိတ်သွားတာမျိုး ရှိသူတွေအတွက် လျှော့ချသင့်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။ XP မှာ
အသစ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ feature အသစ်ဟာ momery ကို အလွန်သုံးစဲသွ လို “Thames” တွေကလည်း
memory ကို သုံးစွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် Style XP လို “Thames” တွေကို memory မြင့်မြင့်မားမား မရှိဘဲနဲ့
install မလုပ်ပါနဲ့။ Window ရဲ့ ဂန္တ၀င် ပုံစံဟာ memory ကို ချွေတာရာရောက်ပြီး အလုပ် များများရှိတဲ့
- ‘Performance’ မှာ ’setting’ ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ‘Adjust for best
performance’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းနဲ့ Start Menu ကို ဂန္တ၀င် ပုံစံပြောင်းလို့ ရသေးပေမယ့် အ ခုနည်းက OS ကနေ
အ လိုအ လျှေက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အ တွက် ကောင်းပါတယ်။
အ င်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပီစီတွေ အ ဖို့တော့ Automatic update ကို ပိတ်ထားတာဟာ အ ဆိုးရော
အ ကောင်းရော ဖြစ်စေပါတယ်။ အ ဆိုးကတော့ browser မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ‘add-ons’ လို update တေ
ွမရနိုင် တော့ပါ။ အ ကောင်းဘက် ကတော့ memory ကို ပိုမို များပြားစွာ သုံးစွဲစေပြီး XP ကို ပိုမြန်စေပါတယ်။
- ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။
(XP.SP2 သမားတွေအတွက်တော့ အလွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > “shutdown icon” အထိ
သွားပြီး shutcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။)
Ctrl+A ဆိုတာ Select All ၊ Ctrl+C ဆိုတာ Copy ၊ Ctrl+V ဆိုတာ Pasteဒီလိုမျိုး မြန်ဆန်စေတဲ့
ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း နည်းလေးတွေကို သုံးစွဲကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့  Fonts တွေဟာ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၊ Web
designer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျိုးဟာ ဖွင့်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်တာဟာ သူ့ရဲ့library ထဲကို အသင့်သုံးပစ္စည်းတွေကို
ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီ လိုမျိုးပဲ တခြားပရိုဂရမ်ေ်တွဟာ ကြာနေတတ်တာဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး
ရှိနိုင်ပြီင်္း အဒီထဲက အကြောင်းတစ်ခုက ‘Fonts’ တွေကို loading လုပ်နေရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- Folder အသစ်တစ်ခု ဆောက်ပါ။ အသုံးမလိုတဲ့ Fonts တွေကို သီးသန့် ပေါင်း စုထားပြီး၊ control panel
ကနေ ခွဲထုတ်နေရာ ရွှေ့  ပစ်လိုက်ပါ။
အင်တာနက် သုံးစွဲ နေတဲ့ အချိန်မှုာ Image ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာ မျိုးစုံက
အက္ခရာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုမိုသဲကွဲစွာ မြင်နိုင်ဖို့ နည်းရှိပါတယ်။
- Ctrl ကို ဖိထားရင်း keyboard အပေါ်တန်းက “+” ကို နှိပ်ပါ။ နှိပ်လေလေ font နဲ့ webpage စာမျက်နှာ
ကြီးလာလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစား လျှော့ချဖို့ ကတော့ ‘Ctrl’ နဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို
ရိုးရိုး Delete ဟာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပေမယ့် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ကိုယ်စားကျန်ပါသေးတယ်။ Shift Key
ကို သတိထားပြီး Delete ခလုတ်ကို နှိပ်ချလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုလား
အပ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ‘Shift + Del’ ကို သတိထားပြီး သုံးစွဲပါ။
ပရိုဂရမ်တွေ မျိုးစုံ ဖွင့်နေရင်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုခုဟာ ကြာမြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ hang
မသွားခင်မှာ windows ရဲ့ ‘Error report’ box တက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဖျောက်ထားပစ်ပါ။
- ပြီးရင် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။Aဲဒီထဲကမှ ‘Error Reporting’ Disable ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အတွက်ဆိုရင် ‘Open-with’ ဟာ အ လွန်အ သုံးဝင်ပါတယ်။ window media player ကို
လက်မခံတဲ့ file extension တွေကို open-with နဲ့ ဖွင့်လှစ်ရပါမယ်။ (အ ရင်ဆုံး player တချို့ ကိုတော့ install
- ‘Browser’ လုပ်လိုက်ရင် ပရိုဂရမ်တွေ အစီအ ရီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး
ဖွင့်လှစ် နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျှ ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူးထင်တဲ့ Note pad ပုံစံ ပရိုဂရမ်တွေကို word pad နဲ့
Photoshop မှာ (.psd) ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ပိုင် extension တွေက လွှဲလို့ တခြားပုံရိပ်တွေကို ဖွင့်ကြည့်ချင်ရင်
‘open-with’ က ပိုပြီးမြန်ဆန်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေ အားလုံးကို floder ထဲမှာ တစ်စု တစ်စည်းတည်း ထားလိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေ အားလုံးကို
ရုပ်ရှင် တစ်ခုကို ကြည့်နေရသလိုမျိုး စ်ီထားနိုင်ပါတယ်။
IE ကို ဖွင့်ရာမှာ တစ်ခါတလေ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ရဲ့ default home page
“msn.com” ဟာ ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို ကြာမြင့်လွန်း တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ IE ကို
ဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာ အဖြူထည် စာမျက်နှာ ဖြစ်နေတာဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် စေပါတယ်။
- www. google.com ကို သွားဖို့ အ တွက် အ ရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
- google ကို ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl key ကုိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲဒီလို short-cuts တွေကို လေ့လာရင်း
သုံးစွဲရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
Search box ဟာ အ လွန်နှေးပါတယ်။ စက်ကို crash ဖြစ်သွား စေမတတ် ပါဘဲ။ အဲဒီ ခွေးကလေးကို
- Animated object မရှိတော့တဲ့ Aတွက် Search box ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ network ဧရိယာ များမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုချင်ရင် My Network places ကနေ
ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ပီစီတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံး ဆီကို access လုပ်ဖို့ ကို တော့ admin ခွင့်ပြုချက်
ဒါမှမဟုတ် password ရယူရပါမယ်။ My Network places မှာ ‘view word group computer’ ကိုရွေးလိုက်။
အဆက်အသွယ် တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
- Keyboard က ‘print screen preview’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံရိပ် အနည်းငယ်သာ လိုချင်ရင် Alt
- ပြီးရင် Start > Run box မှာ ‘mspaint’ဆိုပြီး စာရိုက်ပါ။ (ရိုးရိုး paint program ကို ခေါ်သုံးရင်လည်း
- paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ‘Ctrl+V’ ဒါမှမဟုတ် ‘File menu’ အောက်က ‘paste’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint
နေရာမှာ အခြား Clipboard ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ photoshop corel draw စတာတွေ သုံးစွဲ
- နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အောင်
- (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကို အရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။ Slide Show မှာ
ပုံရိပ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုအကြား ကြာမြင့်ချိန်က်ို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။)
Firefox browser မှာ pop-up blocker ဆိုပြီး လုံခြုံရေး tool ပါဝင်တဲ့ အပြင် add-ons တွေနဲ့ အထူး ပိတ်ပင်
တားဆီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ IE ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version7.0 ကို install လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ pop-up
ပြဿနာဟာ ၇၀% လျှော့ကျ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် browser မှန်သမျှရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် version
ကို ရအောင် ယူထားပါ။
- အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ
လိုသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ icon တွေ အဆင်သင့် မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှိနေမှာပါ။
- IE ကိုဖွင့်ပါ။ Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ Clear History ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ‘Cache’
ကိုရှင်းပါ။ ပိုပြီး အန္တရာယ် ကင်းစေချင်ရင် ‘Cookies’ တွေကို ရှင်းပါ။
- Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ “private data” တွေ့ရပါမယ်။ “Setting” ကို ၀င်ပြီး
အမှန်ခြစ်တွေ ပေးထားပါ။ OK နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ။ “Always Clear my private data when I close firefox”
ရှေ့ မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Cyber cafe မှာ သုံးစွဲဖို့ သင့်တော်စေတဲ့tool တစ်ခုပါ။
- Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီထဲမှာ ကိုယ် uninstall လုပ်စဉ်တုန်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့်
မပျက်ခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ အကြွင်းအကျန်နဲ့ အစအန တွေကို ရှင်းလင်း ထုတ်ပါ။
များသောအားဖြင့် Mouse ရဲ့ default ဆက်တင်ဟာ ပြုပြင်စရာ မလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့
စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ချင်သေးတယ် ဆိုရင်–
- ‘Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကို right click နှိပ်ပြီး properties
ကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာရဲ့ စနစ်မှုာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း ဖြစ်နေခဲ့ရင် အရင်အတိုင်း အခြေအနေ ကောင်းလေးကို ပြန်လည်
ရရှိစေနိုင်ဖို့ System Restore ဆိုတာ ထားရှိပါတယ်။ Memory ကိုရော၊ Hard disk နေရာလွတ်
များများကိုရော လိုချင်တယ် ဆိုရင်အရင် restore point အဟောင်းတွေကို ဖျက်ပစ်ရပါမယ်။
- Start > All Programs > Accessories > System tools > Disk Clean up > More Options အထိ
- Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန်
ပေးရပါမယ်။ ဒီ tool ဟာ window နဲ့ ‘built-in’ tool ဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အမှိုက်
အစအန တွေကို အထိုက်အလျှောက် ဖယ်ရှား ပေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
- ပြီးရင် “customize” box ကို ‘on’ ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ drive တစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual
memory ထပ်မံ တိုးဖြည့်ပေးထားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် set command ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
‘Ctrl + Alt + Del’ ကို တွဲဖက်နှိပ်ရင် ‘Task Manger’ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲကမှ “Log-Off” ကို
ရွေးချယ်ပြီး အမြန် Lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။
- Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:39 PM No comments:
. Windows XP မှာ start နဲ့ shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်း...
XP မှာ start နှင့် shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ..။
XP အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်လိုက်တာပါ…။
အရင်ဆုံး start မြန်အောင်လုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်….။
ထုံးစံအတိုင်း start Run (or) win + R ကို သွားလိုက်ပါ…။
Run Box တွင် regedit ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.။
ပေါ်လာတဲ့ Register Editor Box မှာ အောက်မှာရေးးထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ...။
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Control >> Session Manager >>
Memory Management >> Prefetchparameters ဆိုတာကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
ဘေးက Box ထဲမှာ EnablePrefetcher ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီး right click >> Modify >> Value data မှာ3နေရာမှာ5လို့ပြောင်းပြီး ok ပေးလိုက်ပါ ..။
ဒါဆိုရင် start မြန်အောင် လုပ်နည်းပြီးပါပြီ...။
နောက်တစ်ခု Shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးပါမယ်.. ။
အရင်ဆုံး အပေါ်က အတိုင်းပဲ start Run (or) win + R ကို သွားလိုက်ပါ…။
Run Box တွင် regedit ကိုရိုက်ထည့် ok ပေးပြီး
အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အစဉ်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ...။
HKEY_CURRENT_USER>> Control Panel >> Desktop ထိရောက်အောင်သွားပါ..
ဘေးက Box မှာ AutoEndTasks ဆိုတာကိုရှာပြီး Value data မှာ 1 ပြောင်းပေးလိုက်
HungAppTimeout နဲ့ WaitToKillAppTimeout နှစ်ခုလုံးကို 1000 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..။
အရမ်းကြီးမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြည့်ပေါ့ ကျနော်ကတော့ 1000 လို့ပဲပြောင်းထားပါတယ်..။
နှစ်ခုလုံး လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါခင်ဗျာ…။
တက်တာရော ကျတာပါ..မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ ..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:37 PM No comments:
. gtalk မှာ မိမိနာမည်မကျန်ခဲ့စေချင်ရင်.........
ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများ
ခဲ့စေအောင်သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ဒီလိုပါ။မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk
၀င်သွားလဲ၊သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေကဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုက မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ရင်လဲမိမိ Gmail Address ကိုသူများမသိအောင်ဘယ်လို
ဖျက်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူများသိတော့ကို ကို invite လုပ်မှာပေါ့။အဒီတော့
စက်ထဲမှာ မိမိ Gmail Addressမကျန်ခဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသွားပါတယ်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး Start ထဲက Run ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ Run Box ကျလာပါက Regedit ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
၃။ ထို Boxထဲတွင် Folder ၅ခုတွေ.ပါလိမ့်မည်။
ထို Folder ၅ခုမှ ဒုတိယမြောက် HKEY_CURRENT_USER ဘေးရှိ + ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ Software ရှာပါ။တွေ.ပါကSoftware ဘေးရှိ +ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
၅။ Google ကိုရှာပါ။တွေ.ပါက Google ဘေးရှိ + ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
၆။ Google Talk ကိုရှာပါ။
တွေ.ပါက Google Talk ဘေးရှိ +ကိုနှိပ်ပါ။
၇။ Account နှိပ်ပါ။
Gmail Address များကိုတွေ.ရပါလိမ့်မည်။
အကယ်လို.မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်တော့မိမိGmail Addressနာမည်
ဖျက်လိုပါက မိမိနာမည် ပေါ်တွင် Right ကလစ်နှိပ်၊Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Name/Type/Data တို.အောက်ကျန်ခဲ့ပါက Name အောက်ရှိ ab ပေါ်တွင် Right
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:34 PM No comments:
ကိုယ့် Gmail ကို သူများဝင်သုံးနေလားဆိုပြီး အရင်က သံသယရှိသူ၊ စစ်ချင်သူများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ...။
Google မှ Gmail တွင် ၀င်ရောက်အသုံးပြုသွားသူ၏ IP Address အားဖေါ်ပြပေးထားပါပြီ။
Gmail ၏ ပထမစာမျက်နှာ အောက်ဆုံးနားသို့ သတိထားကာသွားကြည့်လျှင် ..
ယခုကဲ့သို့ This account is open in 1 other location (xxx.xxx.xxx.xxx) Last account activity5Hours ago. ဆိုပြီး စာသားလေးမြင်ရလိမ့်မည်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကြည့်ချင်ပါက ဘေးနားရှိ Detail ဆိုသော လင့်ကလေးနှိပ်ပါက ..
ယခုကဲ့သို့ IP Address များကို မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို သူများ သုံးခဲ့ဘူးသလား၊ ဘယ်နေရာကလဲ စသဖြင့် သိနိုင်ပါပြီ။
အကယ်လို့များ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်ကြည့်နေတုန်းမှာ တဘက်မှာလဲ ကိုယ်မသိအောင် ၀င်သုံးနေပါက Concurrent Session Information တွင် IP များ တစ်ခုထက်ပိုတွေ့နေရမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုပါ Logout လုပ်ပြစ်ချင်ပါက အောက်နားရှိ Sign Out all other sessions ခလုပ်ကလေးနှိပ်ပါက ရှိသမျှ တပြိုင်နက်သုံးနေသော ယူဆာများကို Logout လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ပြီးလျှင်တော့ ကိုယ်က Password ပြောင်းလိုက်ပေတော့ဗျာ..။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:31 PM No comments:
116. G-Talk ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတောင်းဆို နားဆင်နိုင်သော အွန်လိုင်း ရေဒီယိုအစီအစဉ်...
မြန်မာတေးသီချင်းများထုတ်လွှင့်မှု၊ အနောက်တိုင်းတေးများ ထုတ်လွှင့်မှု၊ တရားတော်များထုတ်လွှင့်မှု၊ ဟာသအစီအစဉ်များ နှင့် အခြားသော အစီအစဉ်များထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း
From ........ To..........(မိမိမှ တစုံတယောက်သို့ဆိုပြီး) ဂျီတော့ထဲကနေ ဖော်ပြပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ သီချင်းများမရှိပါက G-talk နှင့်ဖြစ်စေ G-Mail နှင့်ဖြစ်စေ
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ account name လေးကို invite လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူတို့ဘက်က ချက်ချင်းကြီး accept လုပ်မလာသေးဘူးဆိုရင် နည်းနည်းတော့ သည်းခံစောင့်ပေးလိုက်ပါ။
အပျင်းပြေ G-talk ကနေ မိမိကြိုက်ရာသီချင်းတွေကို မိမိနားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ သက်ဆိုင်သူတွေနားထောင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်တောင်းယူ နားဆင်နိုင်ပြီနော်။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:27 PM No comments: